INgxowa-mali yeMbuyekezo yeMali-mali I-FXCC ilungu le-ICF
Ikhaya / malunga / Kutheni iFXCC / Khuselo lweMali
I-FXCC isoloko izinikezele kumgangatho ophezulu wokuthotyelwa komthetho jikelele, kwaye ihlala ikhangele ukubonelela uxolo olupheleleyo lwengqondo kubahwebi bethu, nanini na xa bethengisa khona nalapho bekhona khona. Ngenxa yoko, ngenxa yokufikelela kwethu kwihlabathikazi kwilizwekazi ezikhulayo, inkampani iqinisekise ukuba isakhelo salo semthethweni sihambelana neemfuno eziyimfuneko ezingeziyo kuphela iYurophu, kodwa nakwihlabathi jikelele.
Iinkqubo ezininzi ezithathwe yi-FXCC zihamba ngaphaya kweemfuno ezisemthethweni ezisemthethweni ezimiselwe ukusebenza kumazwe athile. Senza oku ukuze sikhonze abathengi bethu ngazo zonke iinduduzo kunye nentembelo, ukwenzela ukuba bahlale beziva bekhuselekile ngokupheleleyo ekusebenzisaneni kwethu.
Ngomzekelo wethu wezoshishino, impumelelo yethu idibaniswa ngqo nabaxhasi bethu abaphumelelayo, kwaye ngokuthembela nangokungafihli, ukuba sisisiseko sethu, sijonge ukwakha ubudlelwane obuqinileyo kunye nabaxhasi bethu, rhoqo sinomdla wabo engqondweni.
Ukubonelela ngeNjongo yethu yoKhuseleko
Khu seleko no kuHlola
I-FXCC iqinisekisa ukhuseleko kunye nokukhuseleko kwamakhasimende ethu yorhwebo. Ukongezelela, zonke izicelo zezimali zijongwe ngokukhawuleza ukuze kuqinisekiswe ukukhuselwa kwemali kwaye kuqinisekiswe iinkqubo zokusebenza kakuhle.
Ukuba ngumthengisi olawulwa ngokupheleleyo kunye noqinileyo ukususela ngo-2010, sizinikele ekuphatheni abaxhasi bethu ngokufanelekileyo ngokujolise ekunikeni ukukhuselwa kwabathengi kunye nokukhuseleko kwezorhwebo.
Intsebenziswano ephumelelayo kunye nexesha elide lwakhiwe kwithemba. Ngenjongo yokubonelela ngemeko yokurhweba abahwebi befuna, ukufumana intlonipho kunye nokholo lwabaxumi bethu, ngaloo ndlela baqinisekise umdla wabo ophezulu, iFXCC isebenza kumzekelo we-STP / ECN oyinyaniso. Ngokwenza njalo, siqinisekisa ukuba ukungafihli kwaye akukho mpikiswano.
Khuselo loLwazi lwaBucala
Ngomgaqo-nkqubo wokukhusela ukhuseleko lweeNkqubo eziKhuselekileyo (SSL), zonke iinkcukacha zabangasese zabathengi zigcinwa zikhuselekile.
I-FXCC ihlaziya rhoqo, ivavanya kwaye ilawula uhlobo olulodwa lomngcipheko oluhambelana nemisebenzi yayo.
Zonke iimali zabathengi zigcinwe kwiakhawunti ezahlukileyo, zihluke ngokupheleleyo naziphi na zonke ii-akhawunti zeenkampani ze-FXCC.
Amabhunga aMazwe ngamazwe aphesheya
Njengoko sizinikezele ukuba imali yethu yabaxhasi ikhuselekile, iyakhuselwa kwiiBhanki eziPhambili ze-International.